Home » Akụkọ Mgbasa Ozi Omenala » Nke a Hawaii ụgbọ okporo ígwè na nkewa maka njem nleta na obodo, na ga-anabata gị aloha! » Page 2
Ọtụtụ ndị nọ n'àgwàetiti Oahu maara banyere ụdị njem a na-arụ ọrụ zuru oke. Ntuziaka njegharị na Hawaii Visitors na Mgbakọ Mgbakọ na-edebe ya ọkwa. Ọ bụghị akụkụ nke nnukwu ego na-eweta ego nke òtù ụmụnna nke ndị metụtara njem nleta na agwaetiti Oahu.
Ọ na - ejikọ na ebe ezumike ọhụrụ dị na mpaghara Koolina, mana Hawaii Tourism Authority anaghị akwalite ụdị ụgbọ okporo ígwè a na-arụ ọrụ nke ọma dị ka akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị maka Aloha Steeti. Ndị na-abụghị uru Historic Railroad Society na-adabere na ire ahịa tiketi na onyinye iji mee ka ụgbọ okporo ígwè a na-arụ ọrụ, dị anya site na ọtụtụ ijeri emefu na ebubo nrụrụ aka na steeti.
Hawaiian Railway Society na-eji akwa egwu nke Oahu Railway na Land Company kwụsịrị.
Nwee njem na Sọnde nke malitere na mmiri ozuzo wee kwụsị dị ka anwụ na-achasi ike n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè Oahu.
Rgbọ okporo ígwè na Oahu
Hawaiian Railway Society na-arụ ọrụ iji chekwaa akụkọ ụgbọ okporo ígwè bara ọgaranya nke Hawaii. Agụmakwụkwọ a, nke na-enweghị ego nwetara usoro nke fọdụrụ na Oahu (site na Ewa ruo Nanakuli) tinye na Steeti na National Registers of Sites. Taa, Society eweghachila ihe dịka kilomita 6.5 nke egwu ma rụọ ọrụ iji weghachi ihe ndị ọzọ. E weghachiri locomotives diesel atọ na-arụ ọrụ, arụ ọrụla ọtụtụ locomotives uzuoku. Onye ama ama Dillingham parlor ụgbọ ala eweghachiri ma dị maka ịnyagharị na Sọnde nke abụọ nke ọnwa ọ bụla yana kwa maka akwụkwọ ikike.
Hawaiian Railway, ngalaba na-arụ ọrụ nke Hawaiian Railway Society, nwere naanị ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ, akụkọ ihe mere eme na Oahu. Ọ na-enye ụgbọ ịnyịnya abụọ haziri ahazi kwa ụbọchị Sọnde. Site na Mọnde ruo Fraịdee, ọ na-enye ndị njem ụgbọ njem ikike.
N’afọ 1970, ihe abụọ dị mkpa mere. Nke mbu, Waialua Agricultural Co. kwuputara na ha zubere iwepu ha 0-6-2T locomotive Nke 6 n'ihi na nchara na mmebi emeela ka injin ahụ bụrụ ọrụ na-adịghị mma ma bụrụ ihe ize ndụ nye ụmụaka obodo ahụ na-egwuri egwu. John Knaus kpọtụrụ Bill Paty bụ onye njikwa nke Waialua Agricultural Co. banyere ịchekwa na weghachi locomotive. John kpọtụrụ onye isi ya, bụ Captain Henry Davies, nke Naval Ammunition Depot, Lualualei, banyere ịkwaga locomotive ebe ahụ ebe ọ bụ na ọ nwere naanị ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri fọdụrụ na Oahu. Nke na-esote ya bụ akwụkwọ ozi Ed Bernsten nke National Railway Historical Society na-achọ ozi banyere ịhazi otu isi obodo. John natara nkwado ka eweghachiri Nke 6 na Lualualei. Ya na Nick Carter kwurịtara okwu, onye ọzọ na-agba ụgbọ okporo ígwè bụ onye gosipụtara mmasị na ịchekwa isi ụgbọ mmiri ndị dị n'ụsọ oké osimiri maka ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ.
Na August 22, 1970, John Knaus, Nick Carter, Luman Wilcox, na Ken Peale zutere na Coco's Restaurant iji kpaa maka ịmebe isi obodo nke NRHS. A họpụtara Wilcox ka ọ hazie iwu iwu nwa oge. N’abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa Ọgọst, e nwere nzukọ nzukọ na Coco’s, mmadụ 27 bịakwara. Wilcox nwere ngagharị iwe iji hazie isi obodo nke NRHS. Dr. Bob Kemble kwadoro, a na-ebugharị mmegharị ahụ. Iri na atọ n’ime mmadụ iri na ise bịara ya bịanyere aka n’akwụkwọ. Ndị a họpụtara ma họpụta bụ: Luman Wilcox maka onye isi ala, Ken Peale maka VP, Nick Carter maka odeakwụkwọ-Ochekwa, na John Knaus maka onye isi mba. Na October 15, 9, ndị otu ahụ zukọrọ iji kwado Iwu-Iwu, ma hazie Charter Night maka November 1970 na Bishop Museum.
Ka ọnwa nke iri na asaa dị na mkpụrụ ụbọchị iri na asaa, n’afọ 17, eji ụlọ ọrụ Waialua Agricultural Co. adọkpụ ụgbọala buga WA Co. 1971 ka Lualualei. Studentsmụ akwụkwọ elementrị Waialua nyere ochie locomotive ahụ ka ọ pụọ tupu Waialua apụ. Nke 6 bụ ndọta nke butere otu onyinye na Lualualei obere oge. Otu onye na-esi mmiri ọkụ aha ya bụ Dave Griner, onye welder a na-akpọ Dick Marshall, na onye ọrụ aha ya bụ Bob Haney, sonyere ndị ọzọ chọrọ ibinye aka. Na October 6, Hawaii Isi nke National Railway Historical Society ka enyere ikike.
Na October 13, 1970, State nke Hawaii, Ngalaba nke Regulatory Agencies, nyere Hawaii Isi nke National Railway Historical Society, Inc., akwụkwọ iwu maka itinye aha.
Ugbu a, ojiji nke Hawaii Isi, NRHS, nwere nsogbu dịka aha ahụ dị ogologo, ọ nweghịkwa ihe ọ bụla gbasara ụzọ ụgbọ okporo ígwè mpaghara. Yabụ na nzukọ ndị otu na Disemba 19, 1973, ndị otu ahụ tozuru oke iji aha Hawaiian Railway Society na-enweghị ikewapụ onwe ha na NRHS.
Otu ụbọchị dị mkpa: Na Nọvemba 25, 1972, Satọdee, ememe nraranye akara ngosi mweghachi nke Nke 6. Ndị nọ n'ọchịchị nọ n'ọchịchị ime emume ahụ. Mgbe ụbọchị 84 nke ọrụ mweghachi gasịrị, otu nrọ mezuru.
Ka ọ dị ugbu a, Obodo nke Honolulu Rail Transit Project, nke a makwaara dị ka Honolulu High-Capacity Transit Corridor Project, bụ usoro metro ọkụ na-ewu na Honolulu County, Oahu, Hawaii, US Usoro kachasị elu nwere atụmatụ imepụta ihe si abụọ akwa okporo ígwè usoro na ìhè metros na a COMMUTER okporo ígwè-dị ka imewe webata ụgbọ oloko na suburban ọdụ. Ọ ga-abụ nke mbụ a na-agba n'ihu ọha metro sistemụ na United States iji gosipụta ụzọ ihu ụzọ ihu ụzọ yana ụgbọ oloko na-enweghị ọkwọ ụgbọala. Akụkụ nke mbụ nke ọrụ ahụ, na-ejikọ East Kapolei na Ewa Plain na Aloha Má egwuregwu, ga-emeghe na mbubreyo 2021. Akụkụ nke abụọ ya na-aga n'ihu na mpaghara Honolulu mepere emepe na Ala Moana Center ga-emepe na Disemba 2026.